अन्तर्वार्ता Archives - Nepalgunj Business
बीमाको सुरुवात भएको लामो समय भइसकेको छ । तुलनात्मक रुपमा यसको विकास र विस्तारलाई हेर्दा नेपालमा बीमा पहुँच अझै पनि कम छ । तथापी पछिल्लो समय बीमा समितिको सक्रियताका कारण बीमा पहुँचमा केही बृद्धि भएका तथ्याङकहरु आएका छन् । मानिसहरुमा बीमा शिक्षाको अझै पनि अभाव छ । यसलाई पाठ्यक्रममा हाल्न …
पशुपतिदयाल मिश्र नेपालगञ्ज देशकै पुरानो र ऐतिहासिक शहर हो । राजनीतिक, आर्थिक र प्रशासनिकरुपमा पश्चिमको ‘ट्रान्जिट’का रुपमा स्थापित छ । नेपालगञ्ज ठुलो शहर हुँदाहुँदै यसलाई राज्यपक्षबाट बेलाबखत पीडा दिने काम भइरहन्छ । पंचायत, बहुदल होस् चाहे गणतन्त्र ! कहिल्यै राज्यका तर्फबाट प्रोत्साहन मिल्ने काम गरिएन । बरु यहाँ भएका सरकारी …
बाँकेमा नेपालगञ्ज पछिको दोस्रो ठुलो शहर कोहलपुरमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको आर्कषण बढ्दै छ । पछिल्लो केही वर्षयता सहकारी संस्थादेखि वाणिज्यस्तरका बैंकका शाखा खुल्ने क्रम बढेको छ । कोहलपुरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आर्कषण र त्यसको अवस्थाका बारे सिभिल बैंक लिमिटेड कोहलपुर शाखाका प्रमुख बसन्त कुमार रेग्मीसंग कुराकानी गरेका छौं …
‘तिलोत्तमामा यसकारण लगानी सम्मेलन’–नगर प्रमुख बासुदेव घिमिरेससंगको कुराकानी
तिलोत्तमा तीव्र सहरीकरण भैरहेको रुपन्देहीको मध्यभागमा अवस्थित २०७१ सालमा स्थापना भएको नयाँ नगरपालिका हो । जनप्रतिनिधि आइसकेपछि नगरको पूर्वाधार निर्माणको कामले गति लिएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सडक–पूर्वाधार, फोहरमैला व्यवस्थापन, हरियाली पवद्र्धन जस्ता नागरिकका अपेक्षालाई नगरपालिकाले अगाडि बढाएको छ । फरक अभ्यास, नयाँ कार्यको थालनीले यो नगरपालिका मुलुकमैं चर्चामा …
प्रदेश संरचनाको कार्यान्वयनसंगै देशमा संघीयताको अभ्यास शुरु भयो । एकठाउँमा केन्द्रीत अधिकार गाउँ गाउँसम्म लैजान भनेर ल्याएको संघीयताका कयौं राम्रा पक्ष छन्, म त्यसको प्रशंसा गर्छु । तर नेपालगञ्जका हकमा भने ठिक उल्टो हुँदै गएको आभास भएको छ । प्रदेश संरचनाको कार्यान्वयन पछि यहाँ सरकारी तथा गैरसकारी कार्यालय बुटवल, सुर्खेत …
‘सरकारको मापदण्ड अनुसार उत्पादित सिमेन्ट गुणस्तर छैन भन्नुको कुनै तुक छैन’
सरकारले सिमेन्ट उद्योगलाई देशको प्रमुख निर्यातजन्य उद्योग बनाउने घोषणा गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सिमेन्टलाइ निर्यातयोग्य वस्तु बनाउने उल्लेख गरेको छ । महंगो बिद्युत महशुल, आयातित कोइला र ढुवानीको लागत महंगो हुँदा नेपालको सिमेन्ट महंगो रहेको सिमेन्ट उद्योग संघका अध्यक्ष धुब्र थापा बताउँछन् । हाल नेपालमा …
‘हामी पश्चिममा गेष्ट सप्लाई गर्छौ’– बिरेन्द्र बहादुर बस्नेतको ‘त्यो’ अन्र्तवार्ता
नेपालगञ्जलाई ट्रान्जिट बनाएर पश्चिम नेपालको पर्यटनक्षेत्रको विकास गर्ने बहस शुरु भएको छ । त्यसका लागि नेपालगञ्ज–दिल्ली–पोखरा उडानको पहल भइरहेको छ । यद्यपी यि उडान कहिले हुन्छ भन्ने एकिन छैन । नेपालगञ्जले चाहाँदैमा उडान भइहाल्ने होइन । सरकारले पूर्वाधार तयार गर्नुपर्छ एयरलाइन्स कम्पनी सहमत हुनुपर्छ । अनि मात्र उडान हुन सक्छ …
नेपालगञ्ज – पारिश्रमिक लिने व्यक्तिले अनिवार्यरुपमा व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर लिनुपर्ने व्यवस्था गरेसँगै राजश्व कार्यालयमा प्यान नम्बर लिनेको भिड लाग्ने गरेको छ । आन्तरिक राजश्व कार्यालय नेपालगञ्जमा साउन महिनामा मात्र ११ हजारले व्यक्तिगत प्यान नम्बर लिएको प्रमुख कर अधिकृत प्रकाश पौडेलले जानकारी दिए । ‘एक महिनाको अवधिमा ११ हजारले प्यान …
बर्दिया – महेन्द्र राजमार्गसंग सटेको बाँसगढी नगरपालिकामा औद्योगिक केन्द्रका रुपमा उदाउँदै छ । आयकर छुट लगायतका कारण देशकै सबैभन्दा ठुला औद्योगिक घराना चौधरी समूह, गण्डकी नुडल्स्ले यहाँ लगानी भित्रा्एका छन् । चौधरी समूहको वाईवाईले उत्पादन शुरु गरेको छ । गण्डकी नुडल्स्ले रारा चाउचाउ उत्पादन गर्ने गरी पूर्वाधार बनाइरहेको छ । …
आगो निभाउन किन ढिलो पुग्छ दमकल ? वारुणयन्त्रका इन्चार्जलाई प्रश्न
नेपालीको सेनाको मानार्थ सेकेण्ड लेफ्टिनेन्ट पदबाट अवकास पाएपछि झइन बहादुर खड्का ‘पेन्सनको जिन्दगी’ मा रमाउँन चाहेनन् । अवकास लगत्तै उनले नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको बारुणयन्त्र शाखाको प्रमुख पदमा आवेदन दिए र छनौट भए । यतिबेला झइनको काँधमा नेपालगञ्जलाई आगलागीका घटनाबाट जोगाउने जिम्मेवारी छ । १३ जना सहकर्मी र दुईवटा दमकल त छँदै …